Izithombe Zomsebenzi Wokwakha EBrithani (Kusukela NgoSepthemba 2016 Kuya KuFebhuwari 2017)
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Arabhu Isi-Arabhu (SaseLebanon) Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Estonia Isi-Iceland Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Ukraine IsiBasque IsiBatak (SaseToba) IsiBhunu IsiBislama IsiCatalan IsiCebuano IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGalicia IsiGeorgia IsiGreki IsiHausa IsiHebheru IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiJava IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalay IsiMalayalam IsiMyanmar IsiNdebele (SaseZimbabwe) IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPersia IsiPolishi IsiPutukezi IsiPutukezi (SasePortugal) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwidi IsiTahiti IsiTelugu IsiThai IsiTurkey IsiValencia IsiVietnam IsiYoruba IsiZulu
Izithombe Zomsebenzi Wokwakha EBrithani 3 (Kusukela NgoSepthemba 2016 Kuya KuFebhuwari 2017)
Lona umsebenzi owenziwe ehhovisi legatsha elisha loFakazi BakaJehova eBrithani kusukela ngoSepthemba 2016 kuya kuFebhuwari 2017.
Isiza segatsha ngoSepthemba 13, 2016
Umshini wokumba ulayisha inhlabathi elolini. Kuye kwambiwa kwase kususwa inhlabathi yasiwa kwenye indawo ukuze lesi siza silungele ukwakhiwa.
Isakhiwo sesikhashana ngoSepthemba 15, 2016
Labo abasebenza ngogesi babopha izintambo zama-computer esakhiweni sesikhashana. Lesi sakhiwo sizoba nehhovisi nendawo yokudlela yesikhashana phakathi nesikhathi sokwakhiwa kwehhovisi legatsha elisha eduze nalapha.
Isiza segatsha ngoSepthemba 19, 2016
Uma ubuka le ndawo uphezulu, ubona umgwaqo omusha oyindilinga nendlela engena kuleli hhovisi legatsha. Indawo engakwesobunxele somgwaqo oyindilinga, ilungiselelwa ukuba ibe nengadi, idamu kanye nendawo izivakashi nabantu abahlala lapho abazokuma kuyo ukuze babuke lesi sakhiwo.
Isiza segatsha ngoNovemba 3, 2016
Ukhonkolo oqoqwe kulesi siza uyagaywa bese usetshenziselwa ukwakha imigwaqo ekulesi sakhiwo.
Isiza segatsha ngoNovemba 4, 2016
Kule ndawo esiyibona lapha, abantu abasebenza kulesi siza bakha imigwaqo yesikhashana nemigwaqo ezoqhubeka isetshenziswa. Zindlala indwangu emhlophe enezimbotshana lapho okuzokwakhiwa khona umgwaqo ukuze uqiniswe. Ngakwesokudla sesithombe, umshini wokugandaya ugandaya umgwaqo ngaphambi kokuba kundlalwe leyo ndwangu.
Umhlangano wesifunda wokuhlela ukuthuthwa kwegatsha ngoNovemba 5, 2016
Amavolontiya anikezwa imininingwane komunye wemihlangano yesifundo engu-18 ehlelwe yiKomiti Yokwakha kulo lonke elaseBrithani nase-Ireland. KwakunoFakazi abangaphezu kuka-15000 kuleyo mihlangano, futhi abaningi bathembisa ukusiza emsebenzini wokwakha.
Isiza segatsha ngoNovemba 28, 2016
Abasebenza engadini bafaka umanyolo esihlahleni somyezane esisanda kutshalwa. Lesi esinye sezihlahla ezingaphezu kuka-700 ezitshalwe kule ndawo. Leli damu lenza kungagcwali amanzi yonke indawo ngemva kwemvula enamandla. Amanzi emvula angena lapho bese ephuma kancane kancane.
Isiza segatsha ngoDisemba 5, 2016
Kulolu suku olunenkungu, iyaqhubeka imishini ilungisa lesi siza njengoba lo msebenzi usuya emaphethelweni. Sekukonke, labo abasebenza kule ndawo bambe basusa inhlabathi namatshe okungaba ngama-cubic meter angu-160000​—la matshe nenhlabathi angagcwalisa amaloli okulayisha angaphezu kuka-10000!
Isiza segatsha ngoDisemba 6, 2016
Iqembu labasebenza engadini lilungisa inhlabathi ukuze litshale izihlahla zokubiya emaphethelweni engadi enezitshalo ezitholakala kuleyo ngxenye yezwe. Kule ngadi nakulo lonke igceke kutshalwe izihlahla ezihlukahlukene ezingaba ngu-11 nezitshalo ezihlukahlukene ezingaba ngu-16, konke okutholakala kuleyo ngxenye yezwe.
Izindawo zokuhlala ngoDisemba 19, 2016
Ngakwesobunxele, umshini onensimbi ekwazi ukumba nokuthela ukhonkolo, umba umgodi okuzofakwa kuwo insika yefawundeshi yesakhiwo. Okokuqala, kufakwa insimbi imbe umgodi. Ngemva kwalokho, njengoba isiphuma ibe isithela ukhonkolo isebenzisa ipayipi elingaphakathi kwayo. Njengoba sibona maphakathi nalesi sithombe, umuntu osebenza kulesi sakhiwo uphetha ngokufaka izinsimbi kulo khonkolo othelwe emgodini ukuze kuqedelwe ifawundeshi. Sekufakwe izinsika ezingaphezu kuka-360 ukuze kwakhiwe ifawundeshi yezindawo zokuhlala.
Isiza segatsha ngoDisemba 29, 2016
Ekuseni ngosuku olunesithwathwa, osebenza ngamapayipi uxhuma amapayipi amanzi emahhovisi esakhiwo sesikhashana.
Isiza segatsha ngoJanuwari 16, 2017
Umshini wokumba okwazi ukusebenza nasemanzini ukhipha udoti ogcwele edamini elisemaphethelweni alesi siza. Amaningi ala madamu ayesesimweni esibi, edinga ukulungiswa. Ukulungiswa kwendawo esosebeni lwamadamu kuzokwenza inhlabathi ingaguguleki, kunciphise nezikhukhula. Izinhlanzi engaphezu kuka-2500 zikhishwe ngokucophelela zayiswa kwamanye amadamu akuso lesi siza ngaphambi kokuba kulungiswe leli damu.
Izindawo zokuhlala ngoJanuwari 17, 2017
Yilokhu okubonayo uma ubuka le ndawo uphezulu ngasempumalanga. Lapha kusaqalwa ifawundeshi yezindawo ezimbili zokuhlala. Ngezansi ngakwesokudla, ziyabonakala izinsika zikakhonkolo. Ngezansi ngakwesobunxele, usutheliwe ukhonkolo wefawundeshi. Maphakathi, umshini uyaqhubeka umba futhi uthela ukhonkolo wezinsika zefawundeshi.
Isakhiwo sesikhashana ngoJanuwari 23, 2017
Omunye weqembu lalabo abenza umsebenzi wokuqedela, ulungisa isivalo seNdawo Yezivakashi ukuze sipendwe. Kule ndawo yezivakashi, izivakashi zizokwazi ukuma endaweni ephezulu ukuze zibone izithombe nemininingwane yomsebenzi wokwakha zibone nanokuthi usuhambe kangakanani.
Izindawo zokuhlala ngoFebhuwari 14, 2017
Kufakwa insimbi eyindilinga eyenza umshini wokuphakamisa izinto ukwazi ukujikajika. Lo mshini onobude obungamamitha angu-40 ungakwazi ukuphakamisa into engama-metric ton angu-16.
Izindawo zokuhlala ngoFebhuwari 15, 2017
Kusikwa izinsika zokhonkolo ukuze zibe sesilinganisweni esifanele. Lezi zinsimbi ezivela ezinsikeni zokhonkolo zizoboshwa lapho sekukhonkwa.
Isiza segatsha ngoFebhuwari 17, 2017
Abasebenza ngogesi bafaka elinye lamabhodi amabili abhalwe ukuthi JW.ORG kolunye lwezindonga ezihlotshiswe ngamatshe amnyama ezisohlangothini ngalunye endaweni yokungena kulesi sakhiwo.
Lapho ubuka uphezulu ubona umgwaqo ophithizelayo oyindilinga osuqediwe odlula esangweni elikhulu lalesi sakhiwo. Ngenhla ngakwesobunxele, kunamabhodi asanda kufakwa abhalwe ukuthi JW.ORG enza lesi sakhiwo segatsha sibonakale kahle. Lapho idamu elivimbela izikhukhula nengadi enezitshalo ezitholakala kuleyo ngxenye yezwe sekuphelile, kuzoyenza ibe yinhle le ndawo engenela kulesi sakhiwo.
Izindawo zokuhlala ngoFebhuwari 24, 2017
Lo mshini onensimbi yokuphakamisa engamamitha angu-65, ukwazi ukufinyelela izindawo zokuhlala ezine kwezinhlanu ezizokwakhiwa lapho. Lapha sibona labo abasebenza esakhiweni bethela ukhonkolo endaweni okuzopakwa kuyo izimoto, engaphansi kwesinye sezakhiwo ezizoba indawo yokuhlala. Sezifakiwe izinsimbi zokuqinisa ukhonkolo ezizosetshenziswa ezindonga zangaphandle nangaphakathi.
Thumelela Thumelela Izithombe Zomsebenzi Wokwakha EBrithani 3 (Kusukela NgoSepthemba 2016 Kuya KuFebhuwari 2017)